Itoobiya oo sheegtay inay qabteen xubno Al-Shabaab ka tirsan oo Somaliland sii maray | Xarshinonline News
Itoobiya oo sheegtay inay qabteen xubno Al-Shabaab ka tirsan oo Somaliland sii maray
Addis Ababa,(NNN)- Dawladda Itoobiya ayaa shaacisay in ay xidhay 10 xubnood oo ka mid ah Kooxda Al-Shabaab ee Koonfurta Soomaaliya ka dagaallama, kuwaas oo ay sheegtay inay ka gudbeen oo ay sii mareen Somaliland.
Sida aanu ka soo xiganay Shabakadda Nazret.com ee dalka Itoobiya, Saraakiisha Booliska ee dalkaas, ayaa sheegay in maalintii sabtidii ee toddobaadkan ay gacanta ku dhigeen ilaa 10 xubnood oo ay sheegeen inay ka tirsan yihiin Kooxda Al-Shabaab, kuwaas oo ay sheegeen in ay qorshayayeen falal ismiidaamin ah oo qorshahoodu ahaa in ay ku khalkhal-geliyaan Doorashooyinka Itoobiya la filayo in ay ka dhacaan Bishan. Warku wuxuu intaa ku daray in Boolisku sheegeen in Raggan ay gacanta ku dhigeen ay mareen markii hore dhinaca Somaliland.
Ciidamada Boolisku waxay intaa raaciyeen in sidoo kale ay gacanta ku dhigeen Hubkii iyo agabkii kale ee ay u adeegsan lahaayeen falalka xasillooni-darro, kuwaas oo ay xuseen in ay sida ugu dhakhsaha badan u horkeeni doonaan Maxkamad.
Dawladda Itoobiya, ayaa Dalka Ereteriya ku eedeeya in uu tababaro iyo gargaarba u fidiyo Kooxaha ka dagaallama Koonfurta Soomaaliya ee ay Al-Shabaab ka mid tahay.23 bishan May ayaa la filayaa in ay dalka Itoobiya ka qabsoonto Doorasho, taas oo ay codkooda ku dhiiban doonaan in ku dhaw 30-Milyan oo qof oo ku dhaqan dalkaas.
Filed under diinta, gobolka, somaliland
← Somaliland: Xuska Murugadii siddeed sanno ka hor iyo Maanta oo kale
Shalay: Weydiimihii Mudanayaasha Wakiilada iyo war-wareeggii Masuuliyiinta Maaliyadda →